Ny Nataon’ny Zandary Ahy Androany | GAZETY_ADALADALA
Filed under: anao ny fitenenana, fety sy fankalazàna, fiaraha-monina, tapatapany, tontolon'ny asa | Tagged: #ATM, #SabotsyNamehana, #TETEZANAMADA, zandary |
« Zon’olombelona Ny Misakafo Voadona ve vao hihilana? »
Andrianavalona, on 21/10/2013 at 8:09 said:
Miarahaba ny gazety
Izaho koa dia efa nataon’ireo Gendarme Sabotsy ireo toy ny nahazo anao fa ny fitrangany no tsy nitovy.
Izaho moa monina eny ihany, raha iny izaho nandeha moto iny dia nosakanany ary tsy tahaka ny fanakanana rehera no natao tamiko fa efa ho dify andry zareo aho vao nosakanana tampoka, rehefa nitaky ny taratasy rehetra izy ka tsi hitany izay tsy nety, dia nila vaniny t@ zavatra hafa indray izireo ka nilaza fa atao fourrière ny moto. Ny fouriière anefa raha ny fahazahoako azy dia any amin’ny commune no atao. Rehafa najanona tao @ biraon’ny zandrary ny moto miaraka @papier complet dia nasaina nadeha aho ka any @commune no nasainy nandoa vola. Izaho mba nangataka ny hanomezana ahy taratasy @ mahavoatazona ny motoako tao @ zareo dia valiteny anavona no azoko: Angaha izahay heverinla fa mpangalatra fa io moto io ary no mety ho halatra hoy izy ireo fa mandehana mandeha any. Rehefa ni insiste ihany aho dia nanaovana taratasy ihany. Nony Tonga ny alatsinainy saika handoavako ny vola droit de fourrière tany @ commune dia tsy tao indray ny papier fa nolazaina tamiko hoe andehana aloha miresaka @ gendarme nanao fourrière fa izy no mideterminer ny droit, dia namaly aho f’angaha tsy ny comune no mamnao izany @ alalan’ny arrêté municipal, dia tiako ho fantatra koa ny infraction nataoko. dia gaga aho fa na ny mpiasan’ny commune aza tsy mahafantatra akory hoe tokony izy no manao izany. Rehefa nakany @ gandarme aho dia nanaovana valy boraingina fotsiny satria nitaky t@izy ireo ny motif na infraction sy ny texte de base mi determiner ny vola ho alohako izay noterena handoa fotsiny izao 20 000 ar ary ry zareo indray no nadrahona hoe andehana mitory rehefa tsy faly dia ho itatsika eo ny tohiny. Izaho moa tsy nanana fotoana be nolaniaina taminy ny motoako koa ilaiko satria fitondrako miasa aty Antananarivo.
Ny hany nolazaiko taminy fotsiny dia hoe samy mpiasampanjakana isika ka mbola hifanena ary tsy maintsy mbola misy hilanareo ahy fa izaho miasa @ hopitaly lehibe ao andrenivohitra, satria matetika ireny Gendarme na polisy ireny no tena mpanao intervention isaky ny misy havany mihiditra hôpitaly.
Dia mankahery anareo, fa ireo efa fomba fanaony izany indrindra fa ireo Gendarme vao tonga ireo.